BK Murli 14 January 2018 Nepali - BK Murli Today 21 January 2019
BK Murli 14 January 2018 Nepali
२०७४ पौष ३० आइतबार १४-०१-२०१८ ओम् शान्ति “अव्यक्त बापदादा” रिभाइज १९-०४-८३ मधुबन
संगमयुगको प्रभु फल खानाले सर्व प्राप्तिहरू
आज बापदादा आफ्ना सर्व स्नेही बच्चाहरूलाई स्नेहको रिटर्न दिन, मिलन मनाउन, स्नेहको प्रत्यक्षफल, स्नेहको भावनाको श्रेष्ठ फल दिनको लागि बच्चाहरूको संगठनमा आउनु भएको छ। भक्तिमा पनि स्नेह र भावना भक्त-आत्माको रूपमा रहेको थियो। त्यसैले भक्त रूपमा भक्ति थियो तर शक्ति थिएन। स्नेह थियो तर पहिचान वा सम्बन्ध श्रेष्ठ थिएन। भावना थियो तर अल्पकालको कामना भरिएको भावना थियो। अहिले पनि स्नेह र भावना छ तर निकट सम्बन्धको आधारमा स्नेह छ। अधिकारीपनको शक्तिको, अनुभवको अथोरिटीको श्रेष्ठ भावना छ। भिखारीपनको भावना बद्लिएर, सम्बन्ध बद्लिएर अधिकारीपनको निश्चय र नशा चढ्यो। यस्तो सदा श्रेष्ठ आत्माहरूलाई प्रत्यक्षफल प्राप्त भएको छ। सबै प्रत्यक्षफलको अनुभवी आत्मा हौ? प्रत्यक्षफल खाएर हेरेका छौ? अरू फल त सत्ययुगमा पनि मिल्छ र अहिले कलियुगको पनि धेरै फल खायौ। तर संगमयुगी प्रभुको फल, प्रत्यक्ष फल यदि अहिले खाएनौ भने सारा कल्पमा खान सक्दैनौ। बापदादा सबै बच्चाहरूलाई सोध्नुहुन्छ– प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्ति, सर्वगुण, सर्व सम्बन्धको स्नेहको रस भएको फल खाएका छौ? सबैले खायौ या कोही बाँकी छौ? यो ईश्वरीय जादुको फल हो, जुन फल खानाले फलामबाट पारस मात्र होइन हीरा बन्यौ। यस फलले जुन संकल्प गर्योु त्यो प्राप्त गर्न सक्छौ। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। यस्तो प्रत्यक्षफल खानेवाला सदा मायाको रोगबाट तन्दुरुस्त रहन सक्छन्। दु:ख, अशान्ति, सर्व विघ्नहरूबाट सदा टाढा रहने अमर फल मिल्यो नि! बाबाको बन्नु अर्थात् यस्तो श्रेष्ठ फल प्राप्त हुनु।
आज बापदादा आएका विशेष पाण्डव सेनालाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। साथ-साथै ब्रह्मा बाबाका साथीहरू सँग सदा पार्टी गरिन्छ, पिकनिक मनाइन्छ। त्यसैले आज यस प्रभु फलको पिकनिक मनाइरहेका छौ। लक्ष्मी-नारायणले पनि यस्तो पिकनिक गर्दैनन्। ब्रह्मा बाबा र ब्राह्मणहरूको यो अलौकिक पिकनिक हो। ब्रह्मा बाबा साथीहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। तर साथी नै बन। हरेक कदममा फलो फादर गर्ने समान साथी अर्थात् हमजिन्स। यस्ता साथी हौ नि वा अहिले सोचिरहेका छौ– के गर्ने, कसरी गर्ने। सोच्नेवाला हौ वा समान बन्नेवाला हौ? सेकेन्डमा सौदा गर्नेवाला हौ वा अझै पनि सोच्ने समय चाहिन्छ? सौदा गरेर आएका हौ वा सौदा गर्न आएका हौ? अनुमति कसलाई मिलेको छ, सबैले फर्म भरेका थियौ? वा साना-साना ब्राह्मणीहरूलाई कुरा भनेर पुगेका छौ? यसरी धेरै मीठो-मीठो कुरा भन्छन्। बापदादाको पासमा सबैको मनको सफाई र चतुराईका दुवै कुरा पुग्छन्। नियम अनुसार सौदा गरेर आउनु पर्छ। तर मधुवनमा कैयौं सौदा गर्नेवाला पनि आउँछन्। गरेर आउनुको सट्टा यहाँ आएर सौदा गर्छन् त्यसैले बापदादा क्वान्टिटीमा क्वालिटीलाई देखिरहनु भएको छ। क्वान्टिटीको विशेषता आफ्नै छ, क्वालिटीको विशेषता आफ्नै छ। चाहिन्छ दुवै नै। फूलगुच्छामा विविध रंग, रूप भएका फूलहरूले सजावट गरिन्छ। पात भएन भने पनि गुच्छा राम्रो देखिदैन। त्यसैले बापदादाको घरको शृंगार त सबै हौ, सबैको मुखबाट बाबा शब्द त निस्कन्छ नै। बच्चाहरू घरका शृंगार हुन्छन्। अहिले पनि हेर यो ओम् शान्ति भवनको हल तिमी सबै आउनाले सजियो नि। त्यसैले घरका शृंगार, बाबाको शृंगार सदा चम्किराख। क्वान्टीटीबाट क्वालिटीमा परिवर्तन होऊ। बुझ्यौ– आज त केवल मिल्ने दिन थियो फेरि पनि ब्रह्मा बाबालाई साथी मन पर्योि, त्यसैले पिकनिक गरियो। अच्छा।
सदा प्रभु फल खाने अधिकारी, सदा ब्रह्मा बाबा समान सेकेन्डमा सौदा गर्ने, हरेक कर्ममा कर्मयोगी, ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने, यस्ता बाबा समान विशेष आत्माहरूलाई, चारैतर्फका क्वालिटी र क्वान्टीटीवाला बच्चाहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
पार्टीहरू सँग अव्यक्त बापदादाको भेटघाट (अधरकुमारहरू सँग)
१– सदा आफूलाई विश्वभरमा करोडौंमा कोही हामी हौं– यस्तो अनुभव गर्छौ? जहिले पनि यो कुरा सुन्छौ– करोडौंमा कोही, कोहीमा पनि कोही, त्यो स्वयंलाई सम्झन्छौ? जब हूबहू पार्ट दोहोरिन्छ भने त्यो दोहोरिएको पार्टमा हरेक कल्प तिमीहरू नै विशेष हौ नि! यस्तो अटल विश्वास रहोस्। सदा निश्चय बुद्धि सबै कुरामा निश्चिन्त रहन्छन्। निश्चयको निशानी हो निश्चिन्त। चिन्ताहरू सबै मेटिइसक्यो। बाबाले चिन्ताहरूको चिताबाट बचाउनुभयो नि! चिन्ताहरूको चिताबाट उठेर दिलतख्तमा बसालिदिनुभयो। बाबा सँग लगन लाग्यो र लगनको आधारमा लगनको अग्निमा चिन्ता सबै यस्तो समाप्त हुन गयो जस्तो छदैं थिएन। एक सेकेन्डमा समाप्त हुन गयो नि! यस्तो आफूलाई शुभ चिन्तक आत्माहरू अनुभव गर्छौ। कहिले कुनै चिन्ता त हुँदैन! न तनको चिन्ता, न मनमा व्यर्थ चिन्ता र न धनको चिन्ता किनकि दाल रोटी त खानु छ र बाबाको गुण गाउनु छ। दाल-रोटी त मिल्ने नै छ। त्यसैले न धनको चिन्ता, न मनको परेशानी र न तनको कर्मभोगको चिन्ता किनकि जान्दछौ यो अन्तिम जन्म र अन्त्यको समय हो, यसमा सबै चुक्ता हुनु छ त्यसैले सदा शुभचिन्तक। के होला! कुनै चिन्ता छैन। ज्ञानको शक्तिले सबै जानिसक्यौ। जब सबै कुरा जानिसक्यौ भने के होला, यो प्रश्न समाप्त– किनकि ज्ञान छ जे होला त्यो राम्रो भन्दा राम्रो होला। त्यसैले सदा शुभचिन्तक, सदा चिन्ताहरूबाट पर निश्चय बुद्धि, निश्चिन्त आत्माहरू, यही त जीवन हो। यदि जीवनमा निश्चिन्त छैन भने त्यो जीवन नै के हो! यस्तो श्रेष्ठ जीवन अनुभव गरिरहेका छौ? परिवारको पनि चिन्ता त छैन? हरेक आत्मा आफ्नो हिसाब-किताब चुक्ता पनि गरिरहेका छन् र बनाइ पनि रहेका छन्, यसमा हामी किन चिन्ता गर्ने। कुनै चिन्ता छैन। पहिला चिन्तामा जलिरहेका थियौ, अहिले बाबाले अमृत राखेर जलिरहेको चिन्ताबाट मरजीवा बनाइदिनु भयो। जिउँदो बनाइदिनुभयो। जस्तो भन्छन् मरेकोलाई जिउँदो बनाउनु भयो। बाबाले अमृत पिलाउनु भयो र अमर बनाइदिनु भयो। मरेको मुर्दा समान थियौ र अब हेर के बनेका छौ! मुर्दाबाट महान् बन्यौ। पहिला कुनै जीवन थिएन त्यसैले मुर्दा समान नै भनिन्छ नि। भाषा पनि के बोल्थ्यौ, अज्ञानीहरूले आफ्नो भाषामा बोल्छन्– मरिहाल न। वा भन्छन् म मरें भने धेरै राम्रो। अब त मरजीवा भइसक्यौ, विशेष आत्मा बन्यौ। यही खुशी छ हैन। जलिरहेको चिताबाट अमर भयौ– यो कुनै कम कुरा हो र! पहिला सुनेका थियौ– भगवान् मुर्दालाई पनि जिउँदो बनाउनुहुन्छ, तर कसरी गर्नुहुन्छ, यो समझ थिएन। अहिले सम्झन्छौ– हामी नै जिउँदो भएका छौं। त्यसैले सदा नशा र खुशीमा रहने गर।
टिचरहरू सँग:– सेवाधारीहरूको विशेषता के हो? सेवाधारी अर्थात् आँखा खुल्नासाथ सदा बाबाको साथमा बाबाको समान स्थितिलाई अनुभव गरून्। अमृतबेलाको महत्त्वलाई जान्ने विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारीको महिमा हो– जसले विशेष वरदानको समयलाई जान्दछन् र विशेष वरदानहरूको अनुभव गर्छन्। यदि अनुभव छैन भने साधारण सेवाधारी हुन्, विशेष होइन। विशेष सेवाधारी बन्नु छ भने यो विशेष अधिकार लिएर बन्न सक्छौ। जसलाई अमृतबेलाको, संकल्पको, समयको र सेवाको महत्त्व छ– यस्ता सर्व महत्त्वलाई जान्नेवाला विशेष सेवाधारी हुन्छन्। त्यसैले यस महत्त्वलाई जानेर महान् बन्नु छ। यही महत्त्वलाई जानेर स्वयं पनि महान् बन र अरूलाई पनि महत्त्व बताएर, अनुभव गराएर महान् बनाऊ। अच्छा! ओम् शान्ति।
अव्यक्त महावाक्य व्यक्तिगत
सफल गरेर सफलतामूर्त बन
जसरी ब्रह्मा बाबाले निश्चयको आधारमा, रूहानी नशाको आधारमा निश्चित भावीको ज्ञाता बनेर सेकेन्डमा सबैकुरा सफल गरिदिए, आफ्नो लागि राखेनन्, सफल गरे। जसको प्रत्यक्ष सबूत देख्यौ– अन्तिम दिनसम्म तनले पत्र-व्यवहारद्वारा सेवा गरे, मुखले महावाक्य उच्चारण गरे। अन्तिम दिन पनि समय, संकल्प, शरीरलाई सफल गरे। त्यसैले सफल गर्नुको अर्थ नै हो– श्रेष्ठ तर्फ लगाउनु। यसैगरी जसले सफल गर्छन् उनलाई सफलता स्वत: प्राप्त हुन्छ। सफलता प्राप्त गर्ने विशेष आधार नै हो– हर सेकेन्ड, हर श्वास, हर खजानालाई सफल गर्नु। संकल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध-सम्पर्क जेमा सफलता अनुभव गर्न चाहन्छौ, स्वप्रति चाहे अन्य आत्माहरू प्रति सफल गर्दै जाऊ। व्यर्थ जान दिएनौ भने स्वत: सफलताको खुशीको अनुभूति गरिरहने छौ किनकि सफल गर्नु अर्थात् वर्तमानको लागि सफलतामूर्त बन्नु र भविष्यको लागि जम्मा गर्नु।
सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि समर्पण भाव र निश्चिन्त स्थिति हुनपर्छ। सेवामा अलिकति पनि मेरोपनको भाव मिसावट नहोस्। कुनै पनि कुराको चिन्ता नहोस् किनकि चिन्ता गर्नेले समय पनि गुमाउँछ, शक्ति पनि व्यर्थ जान्छ र काम पनि गुमाइदिन्छ। उसले जुन कामको लागि चिन्ता गर्छ त्यो काम पनि बिग्रिन पुग्छ। दोस्रो– सदा सफलतामूर्त बन्ने साधन हो– एक बल एक भरोसा। निश्चयले सदा नै निश्चिन्त बनाउँछ र निश्चिन्त स्थिति भएकाले जति पनि कार्य गर्छन् त्यसमा सफल अवश्य हुन्छ। जसरी ब्रह्मा बाबाले दृढ संकल्पद्वारा हर कार्यमा सफलता प्राप्त गरे, दृढता सफलताको आधार बन्यो। त्यस्तै फलो फादर गर। हरेक खजानालाई, गुणहरूलाई, शक्तिहरूलाई कार्यमा लगाएमा बढ्दै जान्छ। बचतको विधि, जम्मा गर्ने विधिलाई प्रयोग गरेमा व्यर्थको खाता स्वत: नै परिवर्तन भएर सफल हुन जान्छ। बाबाद्वारा जति पनि खजाना मिलेका छन् त्यसको दान गर, कहिल्यै सपनामा पनि गल्तीले प्रभु देनलाई आफ्नो नसम्झनू। मेरो यो गुण हो, मेरो शक्ति हो– यो मेरोपन आउनु अर्थात् खजानालाई गुमाउनु। आफ्नो ईश्वरीय संस्कारहरूलाई पनि सफल गर्यौ भने व्यर्थ संस्कार स्वत: नै जान्छन्। ईश्वरीय संस्कारहरूलाई बुद्धिको लकरमा नराख। कार्यमा लगाऊ, सफल गर। सफल गर्नु अर्थात् बचाउनु वा बढाउनु। मनसाद्वारा सफल गर, वाणीद्वारा सफल गर, सम्बन्ध-सम्पर्कद्वारा, कर्मद्वारा, आफ्नो श्रेष्ठ संगद्वारा, आफ्नो अति शक्तिशाली वृत्तिद्वारा सफल गर। सफल गर्नु नै सफलताको चाबी हो। तिम्रो पासमा समय र संकल्प रूपी जुन श्रेष्ठ खजाना छन्, यिनलाई “कम खर्च बाला नशीन” को विधिद्वारा सफल गर। संकल्पको खर्च कम होस् तर प्राप्ति धेरै होस्। साधारण व्यक्तिले जुन दुई चार मिनेट संकल्प चलाएपछि, सोचेपछि सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यो तिमीले एक दुई सेकेन्डमा गर्न सक्छौ। त्यस्तै वाणी र कर्म, कम खर्च र सफलता धेरै होस् तब नै कमाल गायन गरिने छ। त्यसैले तिम्रो पास जति पनि सम्पत्ति छ, समय, संकल्प, श्वास, तन-मन-धन सबै सफल गर, व्यर्थ नगुमाऊ, न भविष्यको लागि सम्हालेर राख। ज्ञान धन, शक्तिहरूको धन, गुणहरूको धन हर समय मैपनबाट न्यारा बनेर सफल गरेमा जम्मा हुँदै जान्छ। सफल गर्नु अर्थात् पद्मशगुणा सफलताको अनुभव गर्नु।
यस ब्राह्मण जीवनमा–
 जसले समयलाई सफल गर्छन् उनै समयको सफलताको फलस्वरूप राज्य-भाग्यको पूरा समय राज्य-अधिकारी बन्छन्।
 जसले श्वास सफल गर्छन्, ती अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहन्छन्। कहिले चल्दा-चल्दा श्वास बन्द हुँदैन, हर्टफेल हुँदैन।
 जसले ज्ञानको खजाना सफल गर्छन्, ती यस्ता समझदार बन्छन् जुन भविष्यमा अनेक मन्त्रीहरूको राय लिनु पर्दैन, स्वयं नै समझदार बनेर राज्य-भाग्य चलाउँछन्।
 जसले सर्व शक्तिहरूको खजाना सफल गर्छन् अर्थात् तिनलाई कार्यमा लगाउँछन् ती सर्व शक्ति सम्पन्न बन्न पुग्छन्। उनको भविष्य राज्यमा कुनै शक्तिको कमी हुँदैन। सर्व शक्तिहरूले स्वत: नै अखण्ड, अटल, निर्विघ्न कार्यको सफलताको अनुभव गराउँछ।
 जसले सर्व गुणहरूको खजाना सफल गर्छन्, ती यस्ता गुणमूर्त बन्छन् जुन आज अन्तिम समयमा पनि उनको जड चित्रको गायन ‘सर्व गुण सम्पन्न देवता’ को रूपमा हुन्छ।
 जसले स्थूल धनको खजाना सफल गर्छन् ती २१ जन्महरूको लागि मालामाल रहन्छन्। त्यसैले सफल गर र सफलतामूर्त बन। अच्छा।
मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गरेर सदा हल्का रहने डबल लाइट फरिश्ता भव:-
हिंड्दा-डुल्दा सदा यही स्मृतिमा रहोस्– म हुँ नै फरिश्ता। फरिश्ताको स्वरूप के, बोली के, कर्म के... यो सदा स्मृतिमा रहोस् किनकि जब बाबाको बन्यौ, सबै कुरा मेरोलाई तेरो गरिदियौ त्यसैले हल्का फरिश्ता बन्यौ। यस लक्ष्यलाई सदा सम्पन्न गर्नको लागि एकै शब्द याद रहोस्– सबै बाबाको हो, मेरो केही छैन। जहाँ मेरो आउँछ त्यहाँ तेरो भनिदेऊ, फेरि कुनै बोझ महसुस हुँदैन, सदा उड्ती कलामा उडि रहने छौ।
बाबामाथि बलिहार जाने हार लगाएमा मायाबाट हार हुँदैन।
BK Murli 14 January 2018 Nepali Reviewed by brahma Kumaris on January 13, 2018 Rating: 5